Sidee loo Hubiyaa Xisaabta Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo xaqiijiyaa xisaabta twitter-ka?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 310
Hubinta koonto shabakad bulsheed waa talaabo ay aad u jecelyihiin adeegsadayaasheeda. Qeyb ahaan, sababtoo ah mahadsanid, koontooyinkooda waxaa lagu aqoonsan yahay nidaamka twitter laftiisa inuu ansax yahay isla markaana leh joogitaan aad u muhiim ah shabakada la sheegay. Astaanta xaqiijinta ayaa ah calaamadda jeeg buluug ah oo ku xigta magaca koontada.
Si kastaba ha noqotee, gaaritaanka xaqiijintaan maahan qof walba.. Twitter-ka ayaa cadeeyay in kaliya tiro cayiman oo akoonno ah la xaqiijin doono, maadaama ay tahay inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood ee tan.
Waqtigaan la joogo howsha xaqiijinta koontada ma shaqeyneyso, laakiin barxada ayaa cadeysay in dib loo howlgelin doono sanadka 2021. Marka, haddii aad rabto inaad xaqiijiso koontadaada, raac macluumaadka soo socda ee aan kuu keenay.
Waa maxay shuruudaha ay qasab tahay in koontadayda la xaqiijiyo?
Barxadku wuxuu aasaasay in kaliya xisaabaadka la aqoonsan yahay ee waxqabadkooda Twitter-ka uu muhiim yahay saamaynna ku yeelan doono nidaamka xaqiijinta. Intaas waxaa sii dheer, dhaqdhaqaaqa xisaabaadka waa in lagu dejiyaa mowduucyada soo socda: muusiga, waxqabadka, dowladnimada, diinta, saxaafadda, isboortiga, ganacsiga iyo moodada.
Kahor xaqiijinta koontadaada, waa inaad maskaxda ku haysaa dhinacyada qaarkood: Koontadaadu waa in la diyaariyaa; Aqoonso koontadaada oo leh magac masrax ah. Dhanka kale, sawirkaaga muuqaalka waa inuu noqdaa mid shaqsiyeed. Qor taariikh nololeed ku habboon ujeeddooyinka astaantaada, wax kastoo ay tahay mawduucyadu.
Muxuu twitterka ku weydiin doonaa xaqiijin?
Xiriirinta boggaga ka hubiya aqoonsi
Dukumiinti shaqsiyadeed kaas oo aad ku xaqiijinaysid aqoonsigaaga, tusaale ahaan, sawir baasaboor. Waxaad kuusoo diri kartaa sawirka baasaboorka adoo adeegsanaya xiriirka Dropbox
Warqad aad ku sharaxeyso sababaha hubi.
Foomka xaqiijinta waxaa laga heli karaa verification.twitter.com/request. Si aad u buuxiso, waa inaad sidaas ku sameysaa adigoo wax ku qoraya beeraha oo aan ku dhajineynin qoraallada, isla sidaas ayaa ku dhacda xiriiriyeyaasha ay codsadaan
Waa inaad haysataa Ingiriis fiican si aad u buuxiso foomka. Waa muhiim in koontadaadu aqoonsi heer sare ah ku leedahay barxadda, haddii kale, waxaa laga yaabaa inaadan haysan xaqiijinta twitter-ka.
Markaad dhamayso foomka, oo kooban oo dalabka ah ayaa la soo bandhigi doonaa ka dibna xaqiijinta foomka. Waxaad ku heli doontaa jawaabta xaqiijinta koontada emayl ahaan.
Waqtiga udhaxeeya gudbinta foomka iyo helitaanka jawaabta ee twitter way kala duwanaan kartaa. Waxay qaadan kartaa ugu badnaan 15 maalmood iyo ugu yaraan 7.
Waa inaadan badalin magacaaga isticmaale ka dib markaad codsato xaqiijin, maxaa yeelay xaqiijintaada waa laga noqon karaa. Tani waxay sabab u tahay ku dhaqanka shirkadaha qaarkood inay abuuraan akoonno si ay u abuuraan kuwa raacsan kadibna u iibiyaan iyagoo beddelaya magaca.
Haddii codsigaaga la diido, waad isku dayi kartaa markale wakhti kasta. Qiimee sida aad u hagaajin karto astaantaada si aad hawsha ugu celiso. Xusuusnow in xaqiijintu ay ku wajahan tahay xisaabaadka shirkadda iyo shaqsiyaadka aadka saameynta ugu leh barta.
1 Waa maxay shuruudaha ay qasab tahay in koontadayda la xaqiijiyo?
2 Muxuu twitterka ku weydiin doonaa xaqiijin?
3 Bilaabidda xaqiijinta
4 Waqtiga xaqiijinta
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko sheekooyinka Instagram iyaga oo aan dareemin.
Sidee ugu dirtaa goobtaada waqtiga dhabta ah Telegram?